4 Mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu wee lọghachi kpọtee m, dị ka nwoke a kpọtere n’ụra.+ 2 O wee jụọ m, sị: “Gịnị ka ị hụrụ?”+ M wee sị ya: “Ahụrụ m, ma, lee! e nwere ihe ndọba oriọna nke bụ́ ọlaedo ọlaedo,+ otu ọkwá dịkwa n’elu ya. Oriọna ya asaa dịkwa n’elu ya, ee, ha dị asaa;+ oriọna ndị dị n’elu ya nwekwara okporo asaa. 3 E nwekwara osisi oliv abụọ dị n’akụkụ ya,+ otu dị n’aka nri nke ọkwá ahụ, otu dị n’aka ekpe ya.” 4 M wee jụọ mmụọ ozi ahụ na-agwa m okwu, sị: “Gịnị ka ihe ndị a pụtara, onyenwe m?”+ 5 Mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu wee sị m: “Ọ̀ bụ na ị maghị n’ezie ihe ihe ndị a pụtara?” M wee sị: “Ee e, onyenwe m.”+ 6 O wee sị m: “Nke a bụ ihe Jehova gwara Zerọbabel, ‘“Ọ bụghị site n’ụsụụ ndị agha,+ ọ bụghịkwa site n’ike,+ kama ọ bụ site na mmụọ m,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 7 Ònye ka ị bụ, gị oké ugwu?+ Ị ga-aghọ ala dị larịị n’ihu Zerọbabel.+ Ọ ga-ewetakwa nkume bụ́ isi.+ A ga-eti mkpu+ n’ihi ya, sị: “Lee ka o si maa mma! Lee ka o si maa mma!”’”+ 8 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị: 9 “Ọ bụ aka Zerọbabel tọrọ ntọala ụlọ a,+ ọ bụkwa aka ya ga-ewucha ya.+ Unu ga-amarakwa na ọ bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha zitere m ka m bịakwute unu.+ 10 Ònye ledara ụbọchị ihe nta anya?+ Ha ga-aṅụrị ọṅụ+ ma hụ eriri e ji atụ̀ ihe kwụ ọtọ n’aka Zerọbabel. Anya asaa ndị a bụ anya Jehova.+ Ha na-awagharị n’ụwa dum.”+ 11 M wee jụọ ya, sị: “Gịnị ka osisi oliv abụọ a dị n’akụkụ aka nri nke ihe ndọba oriọna ahụ nakwa n’akụkụ aka ekpe ya pụtara?”+ 12 M wee jụọ ya nke ugboro abụọ, sị: “Gịnị bụ ùkwù alaka osisi oliv abụọ ahụ, ndị mmanụ na-acha ọlaedo ọlaedo na-agbapụta n’ime ha site n’okporo abụọ ahụ e ji ọlaedo mee?” 13 O wee sị m: “Ọ̀ bụ na ị maghị n’ezie ihe ihe ndị a pụtara?” M wee sị: “Ee e, onyenwe m.”+ 14 O wee sị: “Ha bụ ndị e tere mmanụ,+ ha dị abụọ, ha guzo n’akụkụ Onyenwe elu ụwa dum.”+